araka ny baiko nomen’ny Jeneraly sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena miandraikitra ny zandarimaria. Noho ny fahatsapan’ny Croix Rouge Internationale miandraikitra ny faritra Oseana Indiana ny asa mivaingana efa vita sy ny fahavononana tanteraka nasehon’ny zandarimaria amin’ny fanajana ny zon’olombelona, nandritra ny fitsidihana narahina tomban’ezaka nataon’izy ireo teto an-toerana, volana vitsy lasa izay, dia nanasa tompon’andraikitra iray hanatrika ny fivoriana miompana amin’izany izy ireo. Hotanterahina any Genève-Suisse ny fivoriana, ao amin’ny foiben’ny Firenena Mikambana ny 30 novambra sy ny 01 desambra 2017 ho avy izao. Ny jeneraly Andriamanana Solofonirina Maherizo, talen’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny any ivelany ao amin’ny sekreteram-panjakana sady misahana ny fandrindrana ny fampiharana ny fanajana ny zon’olombelona eo anivon’ny zandarimariam-pirenena no hanatrika ny fivoriana. Nohamafisiny fa fa mitohy hatrany ireo ezaka marolafy hampiharana ny fanajana ny zon’olombelona ao aminy ary hisy hatrany ny fanaraha-maso hentitra.